Iikhosi zeMicrostation -Geofumadas
I-AulaGEO izisa kuwe le khosi entsha igxile kuyilo lwezakhiwo, usebenzisa isoftware yeMicrostran, evela kwiBentley Systems. Ikhosi ibandakanya ukufundiswa kwethiyori yezinto, ukusetyenziswa kwemithwalo kunye nokuveliswa kweziphumo. Intshayelelo kwiMicrostran: Isishwankathelo…
Le yikhosi yentshayelelo kuhlalutyo lwesakhiwo kunye noyilo kusetyenziswa iBentley Systems' STAAD Pro software. Kwikhosi uya kufunda ukwenza imodeli yentsimbi kunye nezakhiwo eziphathekayo, uchaze imithwalo kwaye uvelise iingxelo. Ekugqibeleni uya kufunda ukwenza imodeli,…
I-Microstation - Funda i-CAD Design Ukuba ufuna ukufunda indlela yokusebenzisa i-Microstation yolawulo lwedatha ye-CAD le khosi yeyakho. Kule khosi, siya kufunda iziseko zeMicrostation. Kwizifundo ezingama-27 zizonke, umsebenzisi uya kuba nakho uku...